Muqdisho: dabley hubeysan oo dad ku dishey isgoyska KM4
Posted On 16-02-2015, 02:37PM
February 16, 2015 (GO)- Dabley hubeysan ayaa galabta afar qof ku dishey labo kalena ku dhaawacdey isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Dadka weerarka lagu bartilmaameedsaday oo dhamaantood ka tirsanaa shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxay la socdeen hal gaari oo yar.
Afarta qof ee la diley ayaa kala ahaa: maareeye ku-xigeenkii garoonka Aadan Cadde, agaasime ku-xigeenkii waaxda saadaasha hawada, iyo labo nin oo kale kuwaasoo midkood injineer ahaa midka kalena ahaa dareewalkii gaariga.
Mas'uuliyadda weerarka waxaa sheegatay kooxda Al-shabaab oo horay Muqdisho uga fulisey weeraro caynkan oo kale ah kuwaasoo qaar kamid ah lagu diley mas'uuliyiin dowlada ka tirsanaa oo badankoodu xildhibaano iyo saraakiil laamaha ammaanka ka hawlgelayey ahaayeen.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa soo xumaanayey todobaadyadii u dambeeyey, wuxuuna weerarka maanta isgoyska KM4 ka dhacay kusoo adaayaa maalin kadib markii mas'uul ka tirsanaa Wasaarada Qorsheynta lagu diley degmada Dharkeynley.